Gadaan Booranaa seera ufii gugurdaa 370 caalaa qabdi,seerii kun namaa-sa’a – Kichuu
HomeNewsAfricaGadaan Booranaa seera ufii gugurdaa 370 caalaa qabdi,seerii kun namaa-sa’a
(VOA Afaan Oromoo) – WASHINGTON,DC —Gadaan Oromoo seeraa fi heera mataa ufii, alaabaa ufii ka akka Booranaatti Baqqalaa Faajjii heeraa fi heera mataa ufii qabdi.Sirnii Oromoo kana tanumaaf UNESCOn qarooma addunyaa irraa barachuu malte jettee mirkansiteef.
Seerii lammeessoo ammoo ka nadheenii—dubartiiti.Maaf akkana jennaan
​”Isiin sanyii namaati.Daaraa dabarsti—nama horti.Nama cufa isiitti dura jira. Qaalluu yoo isiin hin fuudhin laduu [itti gaafatam] hin fuudhu.Warrii nadheen keessaa doote ‘warra ibiddii dhaame’ jedhan.Abbaan gadaa yoo baallii kennu niitii malee hin kennu. Nadheen nama nama horu. Dubbii isiin himatte manuma isiitti qoraniif malee gaaddisa alaatti hin geessan.Abbaa warraa du’eef ibiddi hin dhaamu,yoo niitii doote ammoo ibiddatti dhaame jedhan. Waan cufa dura jirti.Namii daaraa dabrsu(sanyii horu) isii,” jedha aabba Borbor.